Myanmar Internet Directory - Myanmar Internet Directory
HomeMyanmars.NETမြန်မာ့အင်တာနက်အခြား / Othersသတင်း / News (2)လမ်းညွှန် / Directory (2)မိုဘိုင်းအက်ပ် / Mobile Apps (2)ဥပဒေ / Laws (2)
HomeMyanmar Internet DirectoryMyanmars.NETHomeမြန်မာ့အင်တာနက်မူလသို့အခြား / Othersသတင်း / News (2)လမ်းညွှန် / Directory (2)မိုဘိုင်းအက်ပ် / Mobile Apps (2)ဥပဒေ / Laws (2)
Myanmar Internet Directory: over 4,000 Myanmar web sites listed.
You are here: http://dir.myanmars.net
ဒီကဏ္ဍမှာ သင့်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် သင်သိတဲ့ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်၊ ကုမ္ပဏီ ဝဗ်ဆိုက်ကို မတွေ့ဘူး ဆိုရင် အပေါ်မှာ "Add / အသစ်ထပ်ထည့်ရန်" ဆိုတဲ့ လင့်ခ် ကို နှိပ်ပြီး ထပ်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို လူများများက သင့်ဝဗ်ဆိုက်ကို တွေ့သွားမှာပါ။
Arts (အနုပညာ) (5/93)Actors (ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်), Crafts (လက်မှု အနုပညာ), Musicians (ဂီတ အနုပညာရှင်), Photographers (ဓာတ်ပုံ ပညာရှင်), Writers (စာရေးဆရာ)Computer (ကွန်ပျူတာ) (37/805)Associations (အသင်း), CyberCafe (အင်တာနက်ဆိုင်), Hardware Sales (ရောင်းဝယ်ရေး), ISP (အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု), Mobile (မိုဘိုင်း ဖုန်း), Networking (ကွန်ယက်), Payment-Related (ငွေပေးချေမှု)...Directories (လမ်းညွှန်) (5/132)Industrial Zones (စက်မှုဇုံ), Industry Associations (အသင်းအဖွဲ့), Investment Guide (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု), Maps (မြေပုံလမ်းညွှန်), Tradeshows (ကုန်စည် ပြပွဲ)Education (ပညာရေး) (4/64)Alumni (ကျောင်းသူ/သားဟောင်း), Education Services (ဝန်ဆောင်မှု), Schools (ကျောင်း), Universities (တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်)Entertainment (ဖျော်ဖြေရေး) (6/102)Music (သီချင်း), Music Bands (တီးဝိုင်း), Musicians (အနုပညာရှင်), Others (အခြား), Sports (အားကစား), TV ChannelsExpats (အဝေးရောက်) (16/64)Americans in Myanmar, Chinese in Myanmar (中國的), Japanese in Myanmar (日本人), Koreans in Myanmar (한국의), Malaysians in Myanmar (Melayu), Myanmars in Australia, Myanmars in India (အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ)...Government (အစိုးရ) (4/121)Foreign Missions (နိုင်ငံခြားသံရုံး), Ministries (ဝန်ကြီးဌာန), Myanmar Embassies (မြန်မာသံရုံး), United Nations (ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ)Health (ကျန်းမာရေး) (4/44)Blood Donation (သွေးအလှူခံ ဌာန), Hospitals/ Clinics (ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း), Organizations (အဖွဲ့အစည်း), Pharmaceutical (ဆေးဝါး)Housing and Office (2/3)Mandalay, YangonManufacturers (ကုန်ထုတ်) (10/139)Agricultural (စိုက်ပျိုးရေး), Beverages (အဖျော်ယမကာ), Food (စားသောက်ကုန်), Furniture (ပရိဘောဂ), Garment (အထည်ချုပ်), Gems (ကျောက်မျက်ရတနာ), Livestock (မွေးမြူရေး)...Media (စာနယ်ဇင်း) (7/165)Advertising (ကြော်ငြာ လုပ်ငန်း), Classifieds, Magazines (မဂ္ဂဇင်းများ), Myanmar eBooks, News (သတင်း), TV-Radio (ရုပ်မြင်သံကြား/ ရေဒီယို), Weekly Journals (ဂျာနယ်များ)People (လူမှုရေး) (16/198)Charities (ပရဟိတ လုပ်ငန်း), Chin sites (ချင်း ဝဗ်ဆိုက်များ), Environment (ပတ်ဝန်းကျင်), Food & Cooking (ချက်ပြုတ်နည်း), Kachin sites (ကချင် ဝဗ်ဆိုက်များ), Kayah sites (ကယား ဘာသာ ဝဗ်ဆိုက်များ), Kayin sites (ကရင် ဝဗ်ဆိုက်များ)...Politics (နိုင်ငံရေး) (61/31)Cabinet (ပြည်ထောင်စု အစိုးရ), Judges (တရားသူကြီးများ), Lower House (ပြည်သူ့ လွှတ်တော်), Political NGO (နိုင်ငံရေး အဖွဲ့များ), Political Parties (နိုင်ငံရေး ပါတီများ), Upper House (အမျိုးသား လွှတ်တော်), Ayeyarwady Gov (ဧရာဝတီတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ)...Religious (ဘာသာရေး) (4/37)Buddhist, Christian, Islam (Muslim), OthersRestaurant (စားသောက်ဆိုင်) (14/58)Bars and Clubs (အရက်ဆိုင်), Chin Ethnic Food (ချင်း ရိုးရာ), Chinese Restaurants, European Restaurants (ဥရောပ), Japanese Restaurants (ဂျပန်), Kachin Ethnic Food (ကချင် ရိုးရာ), Korean Restaurants (ကိုရီးယား)...SAVE Myanmar (ရေဘေး) (1/149)Myanmar Flood News (ရေဘေး သတင်း)Services (ဝန်ဆောင်မှု) (19/619)Banks (ဘဏ်), Car Dealers (ကားအရောင်းဌာန), Car Servicing (ကားပြင်), Communications (ဆက်သွယ်မှု), Construction (ဆောက်လုပ်ရေး), Consultants (အတိုင်ပင်ခံ), Cosmetic & Beauty Saloons (အလှကုန်နှင့် အလှပြင်ဆိုင်)...Shopping (ဈေးဝယ်) (4/54)Distribution (ဖြန့်ချိရေး), Mobile Phone Vendors (ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများ), Online Stores (အင်တာနက်ဆိုင်), Supermarket (ဆူပါမားကက်)Travel (ခရီးသွား) (16/871)Airport (လေဆိပ်), Car Rental (ကားအငှား), Cruises (အပျော်စီးသင်္ဘော), Domestic Airlines (လေကြောင်း), Hotels -- others (အခြား မြို့များ), Hotels in Bagan (ပုဂံရှိ ဟိုတယ်), Hotels in Inle (အင်းလေးရှိ ဟိုတယ်)...Uncategorized (1/1130)Domains for Sale (ဒိုမိန်း ရောင်းမည်)
Results 1 -3of 100
MANDALIS Pte Ltd http://www.mandalis.com/14, Robinson Road, #08-01A, Far East Finance Building, Singapore 048545 SINGAPORE
Contents Hub http://www.contentshub.com/
Globetrotting http://globetrottinggourmet.com/burma/Food Tours to Myanmar with Globetrotting Gourmet team	View more recently added listings	Arts (အနုပညာ) (93)Computer (ကွန်ပျူတာ) (805)Directories (လမ်းညွှန်) (132)Education (ပညာရေး) (64)Entertainment (ဖျော်ဖြေရေး) (102)Expats (အဝေးရောက်) (64)Government (အစိုးရ) (121)Health (ကျန်းမာရေး) (44)Housing and Office (3)Manufacturers (ကုန်ထုတ်) (139)Media (စာနယ်ဇင်း) (165)People (လူမှုရေး) (198)Politics (နိုင်ငံရေး) (31)Religious (ဘာသာရေး) (37)Restaurant (စားသောက်ဆိုင်) (58)SAVE Myanmar (ရေဘေး) (149)Services (ဝန်ဆောင်မှု) (619)Shopping (ဈေးဝယ်) (54)Travel (ခရီးသွား) (871)Uncategorized (1130)	မြန်မာ့ အင်တာနက် လမ်းညွှန်
There are 4947 listings and 257 categories in our website	All Categories
SAVE Myanmar (ရေဘေး)
ဒါလေး ဝင်ကြည့်ဘို့ အကြံပြုပါတယ်။
Eagle ToursWebsite / အင်တာနက် လိပ်စာ: http://myanmareagletours.com	Myanmar Internet Directoryhttp://dir.myanmars.net
<< HOME / မူလသို့
Arts (အနုပညာ) (93)Computer (ကွန်ပျူတာ) (805)Directories (လမ်းညွှန်) (132)Education (ပညာရေး) (64)Entertainment (ဖျော်ဖြေရေး) (102)Expats (အဝေးရောက်) (64)Government (အစိုးရ) (121)Health (ကျန်းမာရေး) (44)Housing and Office (3)Manufacturers (ကုန်ထုတ်) (139)Media (စာနယ်ဇင်း) (165)People (လူမှုရေး) (198)Politics (နိုင်ငံရေး) (31)Religious (ဘာသာရေး) (37)Restaurant (စားသောက်ဆိုင်) (58)SAVE Myanmar (ရေဘေး) (149)Services (ဝန်ဆောင်မှု) (619)Shopping (ဈေးဝယ်) (54)Travel (ခရီးသွား) (871)Uncategorized (1130)	အသစ် တိုးလာတာကတော့...
MANDALIS Pte LtdContents HubGlobetrottingSuper OneCheck .mm Domain whoisMyanmar Statistical...Central Statistical...Irrawaddy Literary...Telenor Light HouseAlliance for Affordable...	Search...	Myanmars.NETမြန်မာ့ အင်တာနက်
သတင်း / Newsလမ်းညွှန် / Directoryဥပဒေ / Lawsမိုဘိုင်းအက်ပ် / Mobile Appsတိုင်းရင်းသား အဘိဓာန် / Myanmar Dictionariesပိဋကတ် ၃ပုံ / Buddhist Bibleဝဗ်ဆိုက်လုပ်ချင်ရင် / Makeaweb siteကြော်ငြာလိုလျှင် / Advertise here
Copyright © 2017. Myanmar Internet Directory.